ithuluzi lokufikelela kwiwebhusayithi
Iziqulatho zewebhu ziguqulelwa. Kodwa ii-URL zewebhsayithi ziNgesi ezingakhange ziguqulelwe kwezinye iilwimi. Isixhobo sethu seelwimi sinika isisombululo sehlabathi jikelele.
ii-URL zewebhusayithi ziNgesi.
Ngoko, abantu abangengesiNgesi, abasemaphandleni nakwimimandla abakwazi ukuvula iiwebhsayithi. Isixhobo sethu seelwimi sihle kakhulu kubo. Abasebenzisi beelwimi bezizwe baya kufumana iphepha lewebhu ngokunceda nabani na kanye kuphela